Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Hilton Oo Hudheelka Ugu Weyn Eeshiya Baasifiga Ka Furtay
HiltonMid ka mid ah shirkadaha soo dhaweynta ee sida xawliga ah u koraya, ayaa lagu wadaa in ay hotelka ugu weyn ee Asia Pacific ka daah furto 1,080 qol. Hilton Singapore Orchard Janaayo 2022.
Hadda waxa u furan boos celin, huteelku waxa uu ka bilaabmi doona badhtamaha magaalada Singapore ee Orchard Road waxana uu matali doonaa joogitaanka calanka Hilton ee dalka ka dib dib u habeyn balaadhan. Beddelka hadda jira ee Mandarin Orchard Singapore, Hilton Singapore Orchard waxaa iska leh OUE Limited waxaana maamuli doonta Hilton.
Paul Hutton, madaxweyne ku xigeenka, hawlgallada, Koonfur Bari Aasiya, Hilton, ayaa yidhi,"Maadaama ay tahay xudunta iyo goobta muhiimka ah ee magaalada ee loogu talagalay dadka safarka ah ee ganacsiga iyo madadaalada, waxaan ku rajo weynahay awooda kobaca ee goobta martigelinta ee Singapore marka soo kabashada bilaabato oo safarku dib u bilaabmo muddada fog. Waxaan ku faraxsanahay inaan bilowno sanad cusub oo cusub iyadoo la bilaabayo kordhinta wax ku oolka ah ee faylalka gobolka iyada oo loo marayo furitaanka Hilton Singapore Orchard, kaas oo matali doona hudheel dhab ah oo Hilton ah oo ku yaal magaalo muhiim ah oo laga soo galo Koonfur Bari Aasiya, oo aan sugi doono. si aan u sii wadno gaarsiinta heerarkayaga caanka ah ee martigelinta Hilton qof kasta oo soo mara albaabbada hoteelka."
Dabeecad ahaan goobta istaraatiijiga ah ee ay ku taal iyo tas-hiilaadka baaxadda leh iyo adeegyada, Hilton Singapore Orchard cusub waa xudunta ugu fiican ee ganacsiga iyo madadaalada. Wax yar in ka yar hal saac oo baabuur laga soo wado Singapore Changi Airport, socdaalayaashu waxay filan karaan joogitaan quus ah mid ka mid ah meelaha aadka loo jecel yahay ee magaalada oo ay ku raaxaystaan ​​marin u helka cajalado khibradeed oo gaar ah oo laga soo qaatay isku dhafka caanka ah ee cunnooyinka caalamiga ah, moodada iyo nashqadaynta iyo tiro balaadhan. ee suuqyada tafaariiqda. Martida u safraysa arrimo caafimaad waxay sidoo kale qadarin doonaan u dhawaanshaha xarumaha caafimaadka ee takhasuska leh ee ku yaal albaabkooda.
Hoyga Casriga ah
Iyada oo leh 1,080 qolal iyo qolal la cusboonaysiiyay oo ku yaal laba taarood, Hilton Singapore Orchard waxay noqon doontaa mid ka mid ah hoteellada ugu waaweyn Singapore. Martidu waxay heli doonaan qolal iyo qolal kala duwan, halka kuwa la safraya qoysaska iyo kuwa ay jecel yihiin ay dooran karaan inay ballansadaan qolalka isku xirka huteelka kuwaas oo isla markiiba la xaqiijin karo wakhtiga boos celinta. Hudheelka ayaa si fiican loogu meeleeyay inuu u adeego qaybaha kala duwan ee safarka, laga bilaabo wakhtiga firaaqada ilaa dadka safarka ah ee ganacsiga iyo shirkadaha ilaa kooxaha waaweyn.
WAXYAABAHA IYO ADEEGYADA BADAN
Martidu waxay ku raaxaysan doonaan adeegyo iyo adeegyo kala duwan oo hudheelka dhexdiisa ah oo ay ku jiraan laba xarumood oo 24-saac ah oo si dhammaystiran u qalabaysan, barkad bannaanka ah, Qolka Fulinta ee cusub ee la aasaasay iyo xidhiidh toos ah oo leh goob dukaamaysi raaxo leh oo afar dabaq ah oo ay ku jiraan marti-gelin caalami ah iyo mid gudaha ah. noocyada moodada iyo kafateeriyada saxeexa iyo makhaayadaha.
U dejisan in ay noqoto meel lagu qadeeyo, Hilton Singapore Orchard waxay sii kor u qaadaysaa goobta cuntada ee magaalada oo leh shan fikrado cunto oo la diyaariyey oo ay ku jiraan abaalmarinta Chatterbox-ka, laba xiddigood oo Michelin ah Shisen Hanten iyo saddex cunto iyo cabitaan cusub oo soo bandhigaya cunto maalinta oo dhan ah. , makhaayad khaas ah iyo goob lobby ah iyo baar.
SHIRKA IYO DHACDOOYINKA
Iyada oo leh 16 goobood oo dib-u-habayn ballaadhan lagu sameeyay iyo goob xafladeed oo kala duwan oo ka badan 2,400 mitir oo laba jibbaaran, hudheelku wuxuu awood u yeelan doonaa inuu dejiyo shirarka iyo dhacdooyinka u dhexeeya shirarka iyo bandhigyada aroosyada iyo xafladaha bulshada. Bixinta mid ka mid ah goobaha dhacdooyinka ugu waaweyn ee magaalada, Hilton Singapore Orchard waxay soo bandhigi doontaa laba qolal ballood oo si gaar ah loo nashqadeeyey iyo tiir aan lahayn oo lagu rakibay darbiyo LED ah oo casri ah, nalal iyo teknoolojiyad dhawaaqeed oo qaadi kara ilaa 1,000 marti ah iyo horudhac go'an. goobta shaqada. Kulamada yaryar, qorshayayaashu waxay ka dooran karaan 12 qol oo shaqo ah, kuwaas oo badidoodu soo dhaweynayaan iftiinka dabiiciga ah, iyo meelo badan oo dhiirigelin ah oo ku hareeraysan hudheelka oo loogu talagalay nasashada kafeega ee gaarka ah iyo fadhiyada kala goynta.
Cedric Nubul, maamulaha guud, Hilton Singapore Orchard ayaa yiri, "Hilton Singapore Orchard waxay noqon doontaa mid ka mid ah hoteelada aadka loo filayo in la furo 2022 iyo soo kordhin xiiso leh goobta firfircoon ee Orchard Road. Iyada oo leh 1,080 xulasho hoy oo si wanaagsan loo magacaabay, mid ka mid ah goobaha ugu waaweyn ee goobta, shan fikrado cunto oo la diyaariyey iyo meel dhexe oo ku taal bartamaha Singapore ee tafaariiqda iyo goobta qadada, hoteelka ayaa loo qorsheeyay inuu noqdo meel loo doorto ganacsi iyo safarrada firaaqada ah, iyo sidoo kale kuwa halkan deggan. "